Olee Otú M Chọta My iPhone Site A Computer? Zọ Kachasị Mfe! - Iphone
iphone na -agbalị ịgbanyụ
iphone enweghị ike imelite ngwa
ihe m ga -eme mgbe ihuenyo iphone m na -acha oji
kedu ihe ekwentị m ji ekwu na achọpụtara nje
Olee Otú M Chọta My iPhone Site A Computer? Zọ Kachasị Mfe!
Keep na-eme ka ndị enyi gị dịrị nso, iPhone gị ga-abịarukwa nso. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị kpachara anya, ọ ga-ekwe omume iPhone gị efu. Ma ọ furu efu na ikpo ahihia ma ọ bụ ịgafe obodo na Uber, ọ dị mma ịmara otu esi achọta iPhone gị na kọmputa. N'isiokwu a, m ga-egosi gị otu esi eji Chọta My iPhone na kọmputa otú i nwere ike ịhụ gị efu iPhone, ozugbo.
Gịnị Bụ Chọta My iPhone?
Chọta iPhone m na-enye gị ohere ịchọta iPhone, Mac, iPad, iPod, ma ọ bụ Apple Watch gị mgbe ha furu efu ma ọ bụ zuru ohi. Nwere ike ịchọta ha site na iji Chọta iPhone ngwa dị na iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod, ma ọ bụ ịnwere ike iji kọmputa gị chọta ebe ngwaọrụ gị - karịa na nke ahụ.
Olee otú Chọta My iPhone Work?
Chọta My iPhone na-arụ ọrụ site na iji Ọrụ Ọnọdụ (gụnyere GPS, ụlọ elu cell, na ndị ọzọ) na iPhone gị iji gosi ọnọdụ iPhone gị na maapụ. Enwere atụmatụ ndị ọzọ dị mma dị na ntanetị nwere ike inyere gị aka ịchọta ma ọ bụ chebe iPhone gị. Ma ihe banyere ndị ahụ n'otu nkeji.
Olee Otú M Jiri Chọta My iPhone Site A Computer?
Iji jiri Chọta My iPhone site na kọmputa, gaa na icloud.com/find ma banye Apple ID na paswọọdụ gị. Ngwaọrụ gị niile ga-egosi na eserese ngosi. Kpatụ Ngwaọrụ niile na elu ihuenyo ele a ndepụta niile nke ngwaọrụ nwere Chọta My iPhone agbanwuru na-jikọrọ gị Apple ID. Kpatụ aha nke ngwaọrụ ọ bụla iji kpọọ ụda, tinye ngwaọrụ gị na ọnọdụ furu efu, ma ọ bụ hichapụ ngwaọrụ gị.
Ozugbo ị banyere, ị ga-ahụ maapụ nwere akara ngosi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke na-egosi gị ebe ịnọ iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod. Ogologo oge etinyere ya n'ụzọ ziri ezi, ọrụ ahụ na-arụ ọrụ maka ịchọta kọmputa Apple Watch ma ọ bụ Mac. Nke ahụ mara ezigbo mma!
Chere! Chọta iPhone m anaghị arụ ọrụ!
N'ihi na Chọta My iPhone na-arụ ọrụ, ihe abụọ kwesịrị ime:
itunes agaghị eweghachi iphone
1. Chọta My iPhone nwere na-nyeere gị iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod
Nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na Chọta My iPhone na-nyeere nke a site na ịga Ntọala -> iCloud -> Chọta My iPhone .
Na menu a, gbaa mbọ hụ na ịgbanwee ihe na-esote Find My iPhone agbanwuru. Ọ bụrụ na ọ bụghị, naanị gbanye mgba ọkụ. Ọ kwesịrị ịgbanye akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-eme ka ị mara na enyere ya aka.
Mgbe ị nọ ebe ahụ, ana m akwado ịgba mbọ hụ na Send Mpaghara Ikpeazụ agbanwuru. Nke a na-enye gị iPhone ohere izipu Apple ọnọdụ iPhone gị na-akpaghị aka mgbe batrị na-agba ọsọ. N'ụzọ ahụ, ọbụlagodi na batrị ahụ nwụrụ, ịnwere ike ịchọpụta ebe iPhone gị dị (ọ bụrụhaala na ọ dịghị onye na-emegharị ya!).
2. Chọta My iPhone ka agbanwuru na Ebe Ọrụ
Ọ bụrụ na achọpụtara iPhone m ka edobere na iPhone gị ma ọ dị na ntanetị mana Chọta My iPhone ka na-adịghị arụ ọrụ, lelee tab Services Services gị. Kwesịrị ịkwado Ọrụ Ọnọdụ maka Chọta My iPhone. Iji lelee nke a, gaa na Ntọala -> Nzuzo -> Ọrụ Ọnọdụ . Pịgharịa site na ndepụta nke ngwa ọdịnala ruo mgbe ịchọtara iPhone. Ekwesịrị ịtọbe ya mgbe ị na-eji ngwa ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, pịa Chọta iPhone ma họrọ Mgbe ị na-eji Ngwa. Voila!
Iji Chọta My iPhone On iCloud.com
Chọta iPhone m na kọmputa na-arụ ọrụ naanị ma ọ bụrụ na iPhone dị n'ịntanetị. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ebe nrụọrụ weebụ iCloud ga-enwe ntụpọ ntụ ntụ n'akụkụ akụkụ ikpeazụ nke iPhone mara. Nwere ike melite ihe omume na-agwa gị oge ọzọ gị efu iPhone na-aga online. Naanị pịa Ngwaọrụ niile wedaa menu, ma họrọ gị iPhone.
Ugbu a, kwesiri inwe igbe dị n'akụkụ aka nri aka nri nke windo ihe nchọgharị ahụ. Nke ahụ bụ ebe anwansi na-eme. Ọ bụrụ na gị iPhone bụ offline, ị nwere ike ịlele igbe na-esote ebe ọ na-ekwu Gwa m mgbe achọtara m .
Otu igbe ahụ nwere nhọrọ ndị ọzọ na - atọ ọchị. Nwere ike ịtọpụ mkpu na iPhone gị site na ihe nchọgharị weebụ na peeji nke. Naanị họrọ Kpọọ ụda .
Ọ bụrụ na iPhone gị efughi na ihe ndina ihe ndina ya na mkpu anaghị enyere gị aka ịchọta ya, ịnwere ike iji weebụsaịtị a tinye iPhone gị Echefuola Ọnọdụ . Ọnọdụ furu efu na-ahapụ gị igosipụta nọmba kọntaktị ọzọ na ihuenyo iPhone, yabụ ọ bụrụ na mmadụ achọta ya, ha nwere ike weghachite gị ya.
Mana ọ bụrụ na njirimara ndị a niile anaghị enyere aka, ma ọ bụ na ị chere na mmadụ nwere ike iwere iPhone gị, ịnwere ike ihichapụ iPhone gị site na ibe ahụ. Naanị họrọ Ichicha iPhone .
ndụ batrị nke elekere apple
Ugbu a You Maara Otu Esi Eji Chọta iPhone M Site na Kọmputa
Oge ọzọ ezigbo enyi gị dijitalụ na-efu efu, enwere m olileanya na nkuzi a na-enyere aka! Iji Chọta iPhone m na kọmputa bụ ụzọ dị mfe iji chekwaa iPhone gị ma hụ na ị jikọtara ọzọ na obere ihe nkiri dị ka o kwere mee.
Mis na-ezighị ezi iPhone gị tupu? Ndi iji achota iPhone m na komputa chekwaa day? Gwa anyị gbasara ya na ngalaba nkọwa dị n'okpuru. Anyị hụrụ gị n'anya!